Xarunta Waaxda Taleex ee degmada Hodan oo dib loo howlgeliyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xarunta Waaxda Taleex ee degmada Hodan oo dib loo howlgeliyay “SAWIRRO”
Maamulka Gobalka Banaadir ayaa maanta xarigga ka jarey Waaxda Taleex ee degmada Hodan kaddib markii dhawaan waaxdaasi dib u dayactir lagu sameeyay.
Munaasabaddii lagu furayay waaxda Taleex waxaa ka qeyb galay sakiil ka tirsan ciidamada amniga, qeybaha bulshada iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Degmada Hodan Cabdiqaadir Cali Kulane oo isna furitaanka xarunta Waaxda Taleex ka hadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin dib u howlgelinta xarunta, waxaana uu xusay inay ugu adeegi doonaan bulshada degmada ku nool.
Taliyaha qeybta booliska Gobolka Benaadir Jeneraal Maxamed Yuusuf Madaale ayaa sheegay in dib u furidda xarumaha danta guud loogu adeegayo ay qeyb lixaad leh ka qaadan karo horumarka caasimadda.
Ugu dambeyntii Guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee gobolka Benaadir Maxamed Aadan Guuleed “Caano Geel” oo furay xarunta Waaxda Taleex ee degmada Hodan ayaa sheegay in kan maamul ahaan ay sii xoojinayaan dib u dhiska xarumaha dowladda, si dar dargeliyo adeegyada guud ee bulshada.
Shaqsiyaad dacaayad ka fidinaya Maxkamadda ciidanka oo digniin loo jeediyay “Dhageyso”